Thu, Sep 24, 2020 at 11:03pm
शनिबार, २४ श्रावन २०७७,	आहाखबर	2.2K
एजेन्सी । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिएसँगै विजेताको आँकलन गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडनले चुनौती दिँदैछन्।
बाइडन पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालमा उपराष्ट्रपति भएका थिए। बाइडन अमेरिकी राजनीतिमा १९७० देखि सक्रिय रहेका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सर्वेक्षण गर्ने संस्थाहरु आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको पक्षमा जनमत देखाउने कोसिसमा लागिसकेका छन्। जनताको मुड चेन्ज गर्नका लागि उनीहरुले यस्तो गर्ने गरेका छन्।
बिबिसीले निर्वाचन हुनुभन्दा अघि हुने यस्ता सर्वेक्षणमा नजर राख्ने छ। त्यसबाट आउने धारणाले चुनावको धार परिर्वतन गर्न सक्छ कि सक्दैन पत्ता लगाउनुपर्ने छ।
उम्मेदवार कस्तो छाप छोडिरहेका छन्?
अमेरिकामा राष्ट्रियस्तरमा हुने ओपिनियन पोल देशभरमा कुन उम्मेदवार कति लोकप्रिय छन् भन्ने पत्ता लगाउने राम्रो माध्यम हो। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसले राष्ट्रपति चुनावको असली नतिजाको संकेत मिल्दैन। उदाहरणका रुपमा हेर्दा २०१६ मा भएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा हिलारी क्लिन्टन ३० लाख मतले अघि रहेको देखिएको थियो। तर जब परिणाम आयो डोनाल्ट ट्रम्प विजेता बने।
यस्तो किन भयो भने अमेरिकामा इलेक्टोरल कलेज सिस्टम छ। जनताको धेरै भोट हासिल गर्दैमा उसले नै जित्छ भन्ने जरुरी छैन। यो शर्त हटाउने हो भने जो बाइडन यो वर्ष अधिक लोकप्रिय देखिन्छन्। राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा ट्रम्पभन्दा उनी धेरै अगाडि छन्। सर्वेक्षणहरुले बाइडनलाई लगभग ५० प्रतिशत मतदाताले समर्थन गरेको देखिन्छ। पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरु पनि बढिरहेका छन्।
कुन राज्यले अमेरिकी निर्वाचनको नतिजा तय गर्ने छ?
२०१६मा भएका सर्वेक्षणभन्दा अहिलेका सर्वेक्षण अलि स्पष्ट नतिजा दिने खालको रहेको छ। उक्त समयमा ट्रम्प र हिलारीका बीचमा केही अंकको फरक देखिएको थियो। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पोल पनि प्रतिस्पर्धामा पुगेको थियो। २०१६को निर्वाचनमा हिलारी क्लिन्टनले हारेपछि यो महसुस गरियो कि प्रत्यासीले कति बढी भोट पायो भन्ने कुराले महत्व राख्दैन।
निर्वाचनमा विजयी हुन कुल मतभन्दा कुन राज्यबाट कति धेरै भोट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण र निर्णायक हुन्छ। धेरैजसो राज्यले प्रत्येक निर्वाचनमा एकै रुपमा मतदान गर्ने गर्छन। यसको अर्थ हो कि केही नाम चलेका राज्यहरु छन् जहाँ कुनै एक प्रत्यासीले जित्ने स्पष्ट देखिन्छ। यी राज्यहरुले नै राष्ट्रपति कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने निर्णय गर्ने छन्। यी राज्यहरुलाई अमेरिकी राजनीतिमा ‘ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट’ भनिन्छ।
अमेरिका आफ्नो जुन इलेक्ट्रोरल कलेज सिस्टमबाट राष्ट्रपति चुन्छ, उसमा हर अमेरिकी राज्य उसको जनसंख्याको अनुपातको हिसाबमा इलेक्ट्रोरल कलेजको भोट दिन्छ। देशभरमा इलेक्ट्रोलर कलेजको भोट ५३८ हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचन जित्नका लागि कुनै पनि उम्मेदवारले इलेक्ट्रोरल कलेजको २७० भोट आफ्नो पक्षमा ल्याउन जरुरी छ।